बास्कोटाको कमिशन प्रकरणले सरकारको चरित्र प्रष्ट भएको नेताहरुको भनाई spacekhabar
बास्कोटाको कमिशन प्रकरणले सरकारको चरित्र प्रष्ट भएको नेताहरुको भनाई
स्पेसखबर काठमाडौं, १० फागुन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले गोकुलप्रसाद बास्कोटाको अडियो प्रकरणले गम्भीर अवस्था ल्याएको भन्दै यसलाई दुःखद परिघटनाको रुपमा चित्रण गरेका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले बास्कोटाको अडियो प्रकरणमात्रै अहिले बाहिर आएकोले यत्तिकै आधारमा कति दोषी हो ? भनेर एकिनका साथ भन्न नसकिने उल्लेख गरे।
गुरुङले सरकारले ग्लोबल टेण्डरबिना कुनै कम्पनीसँग मात्रै सम्झौता गरेर खरिद गर्ने प्रक्रिया कति उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्दै यो नीतिगत रुपमा पनि पुनर्बिचारको विषय भएको बताए। गुरुङले एमसीसीको विषयमा टिप्पणी गर्दै नेपालले आर्थिक सहायता लिने दिने यो चलिरहने प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे।
विभिन्न दस्तावेज र अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाईले पनि एमसीसी चाहीँ ईण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग भएको कुरा पुष्टि गरेको उनको भनाई थियो।
साक्षात्कारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नै प्रशंसा पाएका गोकुल प्रसाद बास्कोटो कमिशनको अडियो प्रकरण आएपछि यो सरकारको चरित्र के हो ? भन्ने कुरा प्रष्ट भएको टिप्पणी गरे।
उनले एमसीसी सम्झौताबारे राष्ट्रिय छलफल हुनुपर्ने पनि बताए। लोहनीले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको सवालमा नेपालले ऋण, सहयोग वा अनुदान लिन सक्ने भएपनि शर्तहरु हेर्नुपर्ने सुझाव दिए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १०, २०७६, ०७:३७:००
चीनबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री सरकारलाई हस्तान्तरण
लकडाउन थप एक साता लम्ब्याउने तयारी, मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै